Sep 08, 2021 05:53 PM Merolagani
लक्ष्य, नेतृत्व र टिममा मास्टर गर्नुहोस् र तपाई ठूलो व्यवसाय स्थापना गर्न सक्नुहुन्छ।
के तपाईलाई थाहा छ बिल गेट्सले सफ्टवेयरमा लगानी गरेका थिएनन् जसले उनलाई विश्वकै धनी मानिस बनायो? उनले त्यसलाई प्रोग्रामहरुको समूहबाट खरिद गरेका थिए। उनले ठूलो व्यवसाय निर्माण गरे, ठूलो उत्पादन होइन र त्यो नै उनको सफलताको साँचो बन्यो।
व्यवसाय निर्माण गर्नु तीन कुराहरुमा मास्टर गर्नु हो।
पहिलो, व्यवसायलाई दोर्‍याउन आध्यात्मिक लक्ष्य आवश्यक छ।
हेनरी फोर्डले यसलाई मूर्त रुप दिए। उनको लक्ष्य पैसा कमाउनु थिएन, यद्यपि, उनले त्यही गरे र त्यो पनि धेरै मात्रामा। फोर्डको लक्ष्य सर्वसाधारण समक्ष कार ल्याउनु र अटोमोबाइललाई स्वतन्त्र गर्नु हो। उनले त्यस लक्ष्यलाई निरन्तर पछ्याए र धनीहरुले उनलाई पछ्याए।
तपाईको वित्तीय लक्ष्यसँग मेल खाने आध्यात्मिक लक्ष्य पत्ता लगाउनाले त्यसले तपाईलाई सही बाटोमा अघि बढ्न सहयोग गर्दछ।
दोस्रो, हरेक नेतालाई एक टिम चाहिन्छ।
हुनसक्छ, तपाई एकाउण्टेन्ट हुनुहुन्छ, या बीमक या वकिल। तर, तपाई यी तीनवटै हुन सक्नुहुन्न, र तपाईको सफल व्यवसायको लागि यी तीनवटै महत्वपूर्ण छ। धनी व्यवसाय नेताहरुमध्ये तीन साझा कुरा भनेको उनीहरुलाई थाहा हुन्छ कि आफ्नो टिममा गरिएको खर्च एक लगानी हो–त्यस्तो लगानी जसले उनीहरुलाई करिब धनी बनाउँछ।
तेस्रो, हरेक टिमलाई नेता चाहिन्छ।
लेखक जस्तै, जो मिलिटरीमा छ, उनीहरुलाई थाहा हुन्छ कि उनीहरुको समूहले कमजोर नेतालाई पछ्याउँदैन। नेतृत्व आफैमा एक कला हो। यो सामान्य रुपमा उत्कृष्ट हुनु होइन, अरु भित्र भएको उत्कृष्टतालाई बाहिर ल्याउनु हो।
नेतृत्वको सिप कसरी प्राप्त गर्ने? एक सबैभन्दा राम्रो उपाय भनेको स्वयम्सेवा गर्नु हो। धेरै समूहहरुमा, कोही पनि नेतृत्वको जिम्मेवारी लिन चाहँदैनन्। त्यसैले, चाहे त्यो कार्यालयमा होस्, धार्मिक संस्थामा होस् अथवा समाजमा, बोल्नुहोस् र नेतृत्व गर्न स्वयम्सेवा गर्नुहोस्–यो प्रतिक्रिया पाउने र कहा सुधार गर्ने भन्ने थाहा पाउने राम्रो तरिका हो।
यदि तपाई व्यवसायमा सफल हुन चाहनुहुन्छ भने तपाईलाई एउटा व्यक्तिगत सिप अति आवश्यक पर्नेछ र त्यसको चर्चा हामी अर्को पुस्तक सारंशमा गर्नेछौँ।
पूँजी उठाउनु, विज्ञापन गर्नु, मोलभाउ गर्नु, आफ्नो समूहलाई प्रोत्साहन गर्नु र बिक्री गर्नु–व्यवसायि जीवनका यी सबै पक्षहरुमा हुने साझा कुरा के हो?